Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 14)
Raadi dhammaan wixii ku saabsan qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista Xiaomi Black Shark 2, taleefanka cusub ee ciyaaraha ee nooca Shiinaha.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee loogu talagalay Galaxy S9 waxay na siineysaa isla shaqeyn isku mid ah Galaxy S10
Cusboonaysiinta amniga ee bisha Maarso ee loogu talagalay Galaxy S9 iyo S9` + waxay na siisaa isla shaqeynta kamaradda sawir-qaadaha ee Galaxy S10
Samsung waxay jadwal u sameysaa dhacdo soo socota Abriil 10: Galaxy A90 oo ah fiirinta
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday dhacdo daah-fur ah, oo dhici doonta 10-ka Abriil. Samsung Galaxy A90 ayaa la soo saari karaa maalintaas.
Xiaomi Poco F2 wuxuu socod ku marayaa Geekbench wuxuuna muujinayaa qaar ka mid ah qeexitaankiisa
Xiaomi waxaa laga yaabaa inay gudaha ku tijaabineyso Poco F2 soo socota, maaddaama liiska Geekbench ee qalabka uu ka muuqday khadka tooska ah.
Qaabka mugdiga ah ee Samsung ee leh One UI wuxuu si otomaatig ah u hawlgeliyaa habka mugdiga ah ee Android Auto
Isku xirka One UI ee Samsung ee leh Android Pie wuxuu si otomaatig ah u kiciyaa habka mugdiga sidoo kale Android Auto iyada oo aan awoodin in la furo.
Maamulaha Wax soosaarka Xiaomi wuxuu difaacayaa qaabka iibka flash, in kasta oo ay jiraan cabashooyin ay keenayso
Maamulaha wax soosaarka Xiaomi, Wang Teng, wuxuu difaacayaa qaabka iibka tooska ah, maadaama ay shirkadda siineyso ammaan badan si looga fogaado khasaaraha.
Samsung waxay bilaabaysaa soosaarid tiro badan oo ah 12GB RAM oo loogu talagalay taleefannada
Samsung waxay bilawday soo saaris tiro badan oo ah 4GB LPDDR12X DRAM modules oo loogu talagalay casriga casriga ah.
Wuxuu ka dusay ZTE Axon S, taleefan leh nidaam iskiis u jiidaya
ZTE Axon S wuxuu noqon doonaa taleefan casri ah oo yeelan doona naqshad jiingad jiinis ah leh, tanina waxaa lagu muujiyey abaalmarinta cusub ee hadda soo baxday.
Xiaomi waxay u adeegsan doontaa shaashadaha yar yar oo keliya meelaha hoose
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Xiaomi ee ah in loo isticmaalo shaashadaha waaweyn kaliya moodelkeeda dhamaadka-sare bilaha soo socda.
Huawei P30 wuxuu yeelan doonaa shaashadda Samsung AMOLED
Raadi wax badan oo ku saabsan guddiga AMOLED ee ay Huawei P30s isticmaali doonaan, oo ay soo saartay shirkadda Samsung si ay u yeelato tayada ugu sareysa.
Samsung Galaxy A2 Core, xadka ugu hooseeya ee soo socda ayaa hadda ku sii fiday deymayaasha
Nooca rasmiga ah ee Samsung Galaxy A2 Core ayaa la wadaagay. Ma jiraan wax faahfaahin ah oo ku lifaaqan, laakiin waxaan arki karnaa sida ay u egtahay kahor intaysan imaan.
Dareenka faraha ee Galaxy S10 wuxuu ku hagaajiyaa cusbooneysiintiisa
Hubi cusbooneysiinta la sii daayay si loo hagaajiyo waxqabadka dareeraha faraha ee Galaxy S10 usbuucaan.
Xiaomi Mi Power 3: Batariga cusub ee banaanka
Raadi wax badan oo ku saabsan batteriga dibedda ee cusub ee nooca Shiinaha, Xiaomi Mi Power 3, oo leh awood 10.000 mAh.